एमालेमा नयाँ ट्वीष्ट : बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्दै अष्टलक्ष्मी शाक्य ! - चौतारी पोष्ट अनलाइन
एमालेमा नयाँ ट्वीष्ट : बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्दै अष्टलक्ष्मी शाक्य !
नेकपा एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने भएकी छन् । नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका डोरमणि पौडेलले बुधार राजीनामा दिएका छन्। पौडेलको राजीनामासँगै नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य नयाँ संसदीय दलको नेता चयन भएकी छन् ।
वरिष्ठ नेता माधव समूहमा लामो समय खुलेरै लागेकी नेतृ शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि उनी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कित्तामा उभिएको बुझिएको छ । आजै नेपाल समूहले नयाँ पार्टी दल दर्ता निर्वाचन आयोग जाँदै गर्दा एमालेमा नयाँ ट्वीष्ट देखा परेको छ ।
Prevफुट्यो एमाले, नेपाल समूह एमाले समाजवादी बनाउन निर्वाचन आयोगतर्फ
Nextस्मार्ट सिटि नजिकैको अनस्मार्ट गाउँ टिक्रा लहलौरा